Daawo Kaneeco Dhibaato ku haysa Degmada Jariiban iyo Deegaanadeeda https://www.youtube.com/watch?v=EHNAVW1FM7o&feature=youtu.be Sii akhri…
Somalia’s confirmed Covid-19 cases crossed the 1,000 mark over the weekend as the country continues to record an alarming spike in positive results. Coronavirus cases rose by 57 on Sunday and on Monday rose by 35 to now stand at a total of 1,089Sii akhri…
Taliyaha guud ee ciidamada dawlada Federalka Soomaaliya ayaa warqad kasoo baxday Xafiiskiisa waxaa lagu magacaabay taliyaal cusub oo mid noqnaya Saraakiisha Galmudug halka kuwo kalana xilkii laga qaaday loona wareejiyey xilal kale. Taliyaha guud eSii akhri…
Labo Caruur ah oo wali aan qaan gaarin ayaa xalay Mas xiligii habeenimadii ku dilay Miyiga deegaanka Xingalool ee gobolka Sanaag sida ay noo xaqiijiyeen ehelada Caruurta Maskaasi cunay. Labo Caruur ah oo da,doodu kala tahay 5 Sanno jir 7 jir ayaa Sii akhri…
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay inuu shir la qaato ciwalba oo dhaliilaysa maamulkiisa iyo doorashadii uu ku soobaxay ee madaxweynaha jubaland ku noqday. Axmed Maxamed Islaan Axmed MadoSii akhri…
Dablay hubaysan ayaa xalay Degmada Hodan ee gobolka Banaadir ku dishay Marxuum Cali Naaleeye oo lagu naynaasi jiray (Cali Barkhadle), kana mid ahaa Ganacsada goboka Banaadir,dilkaasi kadibna waxay isaga baxsadeen goobtii uu dilkaasi ka dhacay. DSii akhri…
Nin Xoolo Dhaqata ah oo Roob ugu Dhintay Jariiban.
Miyiga deegaanka Mareer oo 35Km dhanka Xeebta ka xigta degmada Jariiban ayaa saaka waxaa ku geeriyooday wiil dhalinyaro ah kadib markii uu roobku ku helay meel cidlo ah. Roobkii saaka ka da,ayey deegaanadaasi ayaa watay dabayl aad u qabow taasoo kSii akhri…